टोल उत्सव- विविधा - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १४, २०७६ विमल निभा
ध नमायाको कुखुराको भाले बिहान–बिहानै कराउने गर्थ्यो ।
आज धनमाया नै पहिले बिउँझेर यताउता फर्‍याकफुरुक गरिरहेकी छन् ।
हंसमान दाइ बारीमा ठिङ्ग उभिएर कतै हेरिरहेका छन् ।
बल्ल कुखुराको भाले कराउँछ– कुखुरी काँ.....।
खरेलनी बजैको प्रभात भजनको नियमितता चालु छ ।
भजनको सुर र ताल भने केही बेग्लै महसुस गर्न
सकिन्छ आज ।
एउटा लयात्मक रफ्तारमा उक्लेर खरेलनी बजैको भक्तिभाव टुप्पोमा अडेको छ ।
र अचम्मको कुरो के छ भने यसमा भूतपूर्व कमरेड श्रीमान खरेल पनि आफ्नो कट्टर नास्तिकतासहित सामेल छन् ।
टोलको नामुद जुवाडे काजी घरको बरन्डामा देखापरेको छ ।
रात–रातभरि जागेर कौडा हान्ने जीवात्मा यसरी बिहानै देखिनु कुनै चमत्कारभन्दा
कम छैन ।
अर्को अचम्म के भने काजीको मुखारविन्द उज्यालो देखिएको छ । त्यहाँ अलिकति पनि रात्रि जाग्रामको थकान छैन । के हिजो राति काजीले दाउमा ठूलै जित हासिल गरेको हो त ? अथवा.....।
घरबाट तल बाटोमा हिँंड्नेलाई काजीले ‘गुडमर्निङ’ गरेको सुनिन्छ ।
टोलका भुसिया कुकुरहरू पनि त्यतिसारो भुकिरहेका छैनन् ।
एक–दुई अति उत्साहित कुकुरको छाउरालाई टोलका केटाहरूले मार्सल आर्ट स्टाइलमा लात्ती हानेर चुप गराएका छन् ।
श्वान बोलीको अभावमा टोल नै अर्को लागिरहेको छ आज ।
अनि सबै टोले कुकुरहरू परम सिद्ध महात्माझैं देखिएका छन् ।
सुब्बा–सुब्बेनीको नित्य झगडाको आवाज सुनेर टोल जाग्ने गर्छ ।
वास्तवमा कुरो के हो भने एक चौथाइ टोलबासीले दुवै जोइपोइका बाझाबाझको चर्को ध्वनि श्रवण गरेर
बिछ्यौनाबाट उठ्ने बानी बसालेका छन् ।
आजको ताजा बिहान भने सुब्बा–सुब्बेनीको झैझगडा बिना नै सहसा जागृत
‘सुब्बा निवास’ बिग्रिएको साउन्ड बक्सझैं विलकुलै शान्त एवं शब्दहीन ।
र सुब्बा–सुब्बेनी हँसिलो मुद्रामा घरको आँगनमा
उभिएका छन् ।
गुरजु स्वयम्भूनाथको दर्शन गरेर ब्रह्ममुहूर्तमै घर फर्की
पनि सक्छन् ।
टोलको केही परको स्वयम्भूसम्मको बाटो उनको नेवारी बोलीको भजनगानले गुञ्जने गर्छ ।
यही आशरत्न गुरजुको नित्यकर्मको आरम्भ हो । कुनै–कुनै दिन भने क्रम टुट्ने गर्छ । जस्तो, आज सत्तरी वर्ष नाघिसकेका ज्येष्ठ नागरिक गुरजु ‘हे भगवान द्य......’ भनेर
आफ्नो घर वरिपरि नै परिक्रमा गरिरहेका देखिन्छन् ।
टोलको उरन्ठेउली ग्वार्चा बेसुर तालमा सिनेमाको गीत गाइरहेको छ ।
यो गीत सुनेर आज कोही पनि उसलाई हप्काउने
मुडमा छैन ।
यसले ग्वार्चाको बेसुरपन चरममा पुगेको छ ।
लौ सुन्नोस्, यो टोलको ग्वार्चा संगीत ! (शब्द बुझ्न गाह्रो) ।
बिहानको उज्यालोमा पनि रातका आवारा लामखुट्टेहरू भुनभुन गरिरहेका छन् ।
एक लामखुट्टे– आज टोलमा के हो पार्टनर ?
अर्को लामखुट्टे– तिमीलाई थाहा छैन, आज टोलको सरकारी धारोमा पानी आउने दिन हो ।
तेस्रो लामखुट्टे– हो र पार्टनर ?
एक लामखुट्टे– हरेक पन्ध्र दिनमा नियमानुसार टोलमा पानी आउने गर्छ ।
अर्को लामखुट्टे– आजै त्यो दिन हो त पार्टनर ?
चौथो लामखुट्टे– हो, आज बिहानको ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म घर–घरको धारोमा एक घन्टा पानी आउनेछ ।
टोलको समय घडीमा ४ बज्छ । त्यसपछि ५ बज्छ ।
अनि ६ बज्छ ।
र ७ बज्छ ।
८ पनि बज्छ ।
अब ९ बजिसकेको छ ।
हो, १० बज्यो । (५ मिनेट भइसकेको छ) ।
टोलको सरकारी धारोमा
पानी आउने कुनै लक्षण देखापरेको छैन । प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:१९